Manampahaizana ao Fianarantsoa Hanambatra ny heriny amin’ny fampandrosoana ny faritra misy azy
12 volana sahady izay no nijoroan’ny fikambanan’ny zanaky ny Faritanin’i Fianarantsoa na ny FIZAFAFI, tarihin-dRamatoa Christine Razanamahasoa sady filohan’ny Antenimieram-pirenena.
Nampahafantatra ny fisian’ny fikambanana sy ny tanjona kendreny teny amin’ny Yandy By pass izy ireo omaly ka nivoitra nandritra izany fa maro olona manampahaizana i Fianarantsoa na ilay antsoina hoe : cerveau. Hivondrona izy ireo hanambatra ny heriny ho fampandrosoana ireo faritra 5 na 6 mandrafitra azy ahitana ny Faritra Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany. Tamin’ny 21 febroary taona 2019 no niorina ny fikambanana araka ny artikla 268. Tanjon’izy ireo ihany koa ny haneho ny firaisankinany amin’ny rehetra hampandrosoana ny firenena ka anisan’ny hanaovany ezaka manokana ny fampandrosoana ny lafiny ara-tsosialy, ny tontolo iainana ary ny toekarena. Mikasika ilay feo mandeha fa efa mahatratra 70 isa ankehitriny ny sonian’ireo solombavambahoaka voangona hanongana ny praiminisitra lehiben’ny governemanta dia nilaza ity filohan’ny Antenimieram-pirenena ity fa tsy mbola nahitany porofo izany hatramin’izao.